Tag: africa | Sagal Radio Services
Sagal Radio Services • News Report/Opinion • October 8, 2015
Nin Soomaali ah oo maqaaxi ku taal magaalada Cape Town ku dilay Saddex ruux Soomaali ah
Sagal Radio Services • News Report • February 12, 2015
Nin Soomaali ah ayaa xalay toogasho ka geystay goob maqaaxi ah oo ku taal deegaanka Mitchell Plain ee magaalada Cape Town ee dalka Koofur Afrika, iyadoo ninkan uu ku hubeysnaa bastoolad, waxaana uu rasaas ku furay dadkii maqaaxida ku sugnaa.
Ivory Coast iyo Ghana oo u soo baxay Sema Final-ka Koobka Qaramada Afrika (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • February 2, 2015
Xulalka Ivory Coast iyo Ghana ayaa xaqiijiyay u soo bixidooda Sema Finalka Koobka Qaramada Afrika, kadib markii ay ka kala badeen xulalka Algeria iyo Guniea.
Ganacsiga Soomaalida ee Magaalada Cape town oo maalintii 5-aad Xiran
Sagal Radio Services • News Report • August 16, 2014
Wararka ka imaanaya Magaalada Cape town ee Dalka Koofur Afrika ayaa sheegaya in Maalintii 5-aad ay Xiran yihiin Goobihii Ganacsi ee ay ku lahaayeen Soomaalida Magaalada Cape town.
Kooxo Burcad Koonfur Afrikan Ah Oo Dil Iyo Boob U Geystay Muwaadiniin Soomaaliyeed
Sagal Radio Services • News Report • June 9, 2014
Weerarkaan Lagu Boobay Goobaha Ganacsiga Soomaalida ayaa Waxaa uu Ka Dhacay Tuulo Ku Taala Magaalada Pretoria Ee Caasimada Dalka South africa waxaana Lagu Boobay In Ka Badan 20 Dukaan oo ay Lahaayeen Muwaadiniin Soomaali ah Kuwaa oo ay Cagta Mariyeen Shacab South africaan ah.
Madaxweynaha Somalia oo ka qayb galaya Caleema Saarka Madaxweynaha Koonfur Afrkia
Wafdi uu hogaaminayay Madaxweynaha Somalia Xasan Sh Maxamuud ayaa xalay soo gaaraay Magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika iyadoo Garoonka diyaaradaha ay ku soo dhaweeyeen qaar ka tirsan Mas’uuliyiinta Safaarada iyo Dowlada dalka Koonfur Afrkia iyo Jaaliyada Somaliyed ee ku nool Dalkaas.
Labo ruux oo Ganacsato Soomaali ah oo lagu dilay duleedka magaalada Johannesburg ee K/Afrika
Sagal Radio Services • News Report • May 2, 2014
Kooxo burcad koofur Afrikan ah ayaa ku dilay duleedka magaalada Johannesburg labo wiil Ganacsato Soomaali ah, kuwaasoo dukaan ku lahaa tuulo lagu magacaabo Mathuli.
Booliiska Magaalada Johannesburg oo xiray Soomaaliya lagu Qabtay Jaad
Sagal Radio Services • News Report • April 30, 2014
Laba qof oo Soomaali ah oo lagu qabtay Jaad ama Qaad ayaa lagu xiray magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika maalintii Isniinta ahayd ee lasoo dhaafay sida ay sheegeen booliiska dalkaas.
Midowga Africa “Weerarada Xildhibaanada loo geysto lama aqbali karo”
War kooban oo laga soo saaray xafiiska wakiilka ururka Midawga Africa u qaabilsan arrimaha Soomaaliya sidoo kalena ah madaxa ugu sareeya ciidamada AMISOM Max’ed Saalix Annadifi ayaa waxaa uu si kulul ugu cambaareeyay qaraxii maanta lagu dilay xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya mid kalena lagu dhaawacay.
Dhaca Lagu Hayo Ganacsatada Soomaaliyeed Ee Ku Nool Koonfur Afrika Oo Sii Kordhaya
Sagal Radio Services • News Report • February 25, 2014
Iyadoo mudooyinkii ugu dambeeysay ay socdeen dadaallo looga hortagayo kooxaha caadeeystay dhaca goobaha ganacsiga Soomaalida ee dalkaasi Koonfur Afrika ayaa haddana waxaa sii kordhaya falalka dhaca ah ee loo geysanayo ganacsatada Soomaaliyeed.
Kulan Looga Hadlayay Ammaanka Ganacsatada Soomaaliyeed Oo Xalay Lagu Qabtay Dalka South Africa
Sagal Radio Services • News Report • February 1, 2014
Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cepetown ayaa xalay yeeshay kulan looga hadlayay amaanka xaafadda ay ka deganyihiin Cepetown kadib markii ay la soo derista xaaladdo amnidarro ah.
Midowga Afrika Oo Balan Qaaday In Uu Si Buuxda U Taagerayo Xukuumadda Cusub Ee La Soo Dhisi Doono
Sagal Radio Services • News Report • January 12, 2014
Danjiraha Midowga Afrika ee Soomaaliyaa ayaa ballan qaaday in AMISOM ay si buuxda u taageereyso xukumadda cusub ee la soo dhisi doono, isagoo ka codsaday shacabka iney taageeraan dowladooda.
Midowga Afrika oo go'aan ka gaaray tirada rasmiga ah Ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ka howlgalaya
Magaalada Adis Ababa ee xarunta Dalka Itoobiya waxaa kulan ku yeeshay Golaha amaanka iyo Nabad Galyada Midowga Afrika waxa ayna go'aamiyeen in la kordhiyo tirada Ciidamada AMISOM ee ka howlgala gudaha Dalka Soomaaliya.